Kuklonyeliswe othisha abenza kahle | News24
Kuklonyeliswe othisha abenza kahle
IZITHOMBE: lethiwe makhanyaUNgqongqoshe wezeMfundo uMnuz Mthandeni Dlungwane noNks Cameron wase-Nottingham Road ophume isithathu emkhakheni we-Excellence in Grade R teaching.
“KUTHATHA uhlobo lomuntu oyisipesheli ukuthi agile izimanga ekufundiseni.”
Lawa ngamazwi kaNgqongqoshe wezeMfundo esiFundazweni saKwaZulu-Natal uMnuz Mthandeni Dlungwane ngesikhathi ekhuthaza othisha emcimbimi wokuklonyeliswa kwabo obubanjelwe e-Royal Show Ground ngoLwesine olwedlule mhla zingama-29 kuLwezi (November).
Lomcimbi waminyaka yonke ohlanganisa othisha abaphuma ezifundeni ezahlukene zaKwaZulu-Natal. UMnuz Dlungwane uthe lena ngenye indlela yokukhuthaza kanye nokugqugquzela othisha ukuthi basebenze ngokuzikhandla ekunikezeni izingane zakulesi sifundazwe imfundo esezingeni eliphezulu.
Ekhuluma nabothisha abebehambele lo mcimbi uthe : “Othisha bethu basebenza ngaphansi kwezimo ezinzima. Indawo abasebenzela kuyona ziphenduke izindawo zodlame ngoba imiphakathi ekuzona inodlame kodwa noma kunjalo bayakwazi ukuthi benze umsebenzi wabo ngendlela encomekayo kakhulu.
Ukuba uthisha akusiwona umsebenzi nje kuphela kodwa kuwubizo. Othisha bethu basebenza kanzima ekubeni behola nemali encane.
“Lena ngenye yezindlela yokubakhuthaza kanye nokukhombisa ukuthi siyakubona ukuzimisela kwabo kanye nokusebenza kanzima kwabo yize kunzima. Kumele sibabonge othisha abenza kahle sibakhuthaze futhi ukuthi benze kahle kakhulu.
Siyakholelwa ukuthi othisha kanye nesystem yenza kahle kakhulu kanti kumele sikubonge loko,” kubeka yena .
UDlungwane ube esekhuthaza umphakathi ukuthi ubambe iqhaza nawo ekwilisaneni nodlame oluqhubekayo ezikoleni.
“Udaba lwemfundo luyinto yomphakathi. Into oyibona yenzeka ezikoleni ikhombisa into eyenzeka emphakathini wakuleyo ndawo.
Umphakathi kumele ubambe iqhaza kakhulu ekwenzeni isiqiniseko sokuthi luyagwemeka lolu dlame olwenzeka ezikoleni.
Ngeke size silindele ukuthi umfundi afundiswe esikoleni ekubeni ekhaya lakhe engafundisekile.
Sikhuthaza abazali ukuba babambe iqhaza elikhulu endleleni abakhulisa ngayo izingane. Into esizoyenza njengoMnyango ukuthi sizoba nezinhlelo ezizohlanganisa abazali kanye nomphakathi ukuthi badlale indima enkulu ekuqinisekiseni ukusebenzisana ekukhululiseni kahle izingane,” kubeka yena.
Isifunda saseMgungundlovu siphumelele emikhakheni emihlanu kulezi zindondo.